यी ४ कुरा, जस्ले सम्बन्धलाई सुमधुर बनाउँन मद्धत गर्दछ -यी ४ कुरा, जस्ले सम्बन्धलाई सुमधुर बनाउँन मद्धत गर्दछ -
यी ४ कुरा, जस्ले सम्बन्धलाई सुमधुर बनाउँन मद्धत गर्दछ
१२ श्रावण २०७७, सोमबार १५:१३ मा प्रकाशित
एजेन्सी । सम्बन्ध जस्तो किन नहोस् टिकाइ राख्नलाई समय दिनुपर्छ । यसले सम्बन्धलाई सुमधुर बनाउँछ ।
सम्बन्धमा ती साना–साना कुराकोे ध्यान दिनुपर्छ जुन तपाईलाई सामान्य लाग्न सक्छ । जब दुईजना एक सम्बन्धमा हुन्छ तब समय मात्र होइन मन, इच्छा आकांक्षा, राम्रो नराम्रो सबै कुरा साझा गर्नु आवश्यक हुन्छ ।
यस्तो सम्बन्धमा आफ्नो विगतलाई मात्र हेरिँदैन भविष्यको पनि योजना एक-अर्काले मिलेर बनाउनुपर्छ । दिनहुँ सानो तिनो विवाद हुने नै गर्दछ । तर ती साना कुरा पछि ठुलो भएर सम्बन्धमा टुट्ने स्थितिमा पुग्छ । त्यसकारण यी कुराहरुलाई जीवनमा ध्यान दिनुपर्छ ।
१. कुराकानी निरन्तर हुनुपर्छ
कुनै पनि सम्बन्धको मेरुदण्ड नै कुराकानी हो । सम्बन्धलाई बनाउन र सुधार्नलाई कुराकानी महत्वपूर्ण हुन्छ । यसले एक-अर्काको धारणा थाहा हुन्छ । र एक-अर्काको मनमा स्थान बनाउन सजिलो हुन्छ ।
२. तुरुन्त प्रतिक्रिया नदिनुस्
यदि तपाई साथीसँग कुराकानी गर्दै हुनुहुन्छ भने साथीको कुरा सुनिरहनु तुरुन्त प्रतिक्रिया नदिनुहोस् । जसले गर्दा हार जीतको समस्या उत्पन्न भएर सम्बन्ध बिग्रिन सक्छ । त्यसकारण एक अर्काको कुरा धेरै समयसम्म सुनिरहनुपर्छ । यी कुराहरु सम्बन्धको लागि फाइदाजनक हुन्छ ।
३. समय दिनुहोस्
विवाह वा प्रेममा हुनुहुन्छ भने समय अनिवार्य दिनुपर्छ । यदि सम्बन्धमा समयको अभाव छ भने ठुलो समस्या आउन सक्छ । अधिकांश मानिसको जीवनमा यो समस्या आउने गरेको छ । समय बिना तपाई कसरी आफ्नो साथीलाई खुसी राख्न सक्नुहुन्छ ?
समय महत्वपूर्ण हुन्छ सम्बन्धमा । दुबै जनाले आ–आफनो स्वार्थमा लाग्यो भने सम्बन्ध बिग्रिन धेरै समय लाग्दैन । जहिले पनि दुवैजनाको उन्नतिको बारेमा सोच्नुहोस् । त्यसको लागि समय आवश्य हुन्छ ।
४. एउटा नियम छ
एउटा नियम छ । एक जोडी थिए, उनीहरुको दिनभरी मनमुटाव र नराम्रो बिते पनि रातीको खानासँगै खाने नियम थियो । खाना खाँदा ती जोडी एक अर्कासँग बोल्न बाध्य हुन्थे । त्यसकारण दिनभरीको मनमुटाव साँझ खाना खाने बेला सकिन्थ्यो । त्यसकारण यो नियम सबैले बनाउनु पर्छ । यसले जोडीलाई राम्रो हुन्छ ।
सावधान ! यी बानीहरूले तपाईंको प्रतिरक्षा प्रणालीलाई कमजोर पार्दछ
दालचिनी : कोरोनाको उपचारको लागी एक रामबाण
सम्बन्ध टिकाइ राख्न यी ४ कुरालाई ध्यान दिनुहोस
यी चिज सेवन गरेर हटाउनुहोस अल्छिपना
कोरोना लामखुठट्टेको माध्यमबाट मानिसमा सर्छ कि सर्दैन ?
मधुमेह बिरामीहरू कोरोनाले गर्दा मृत्‍यु हुन्छन ? के भन्छ अनुसन्धान ?